Isikhundla Sezithunywa Zevangeli
Okubizwa ngokuthi 'ama-Hottentots' neziChwe babhalwe yizizwe zaseYurophu ezanda ukufika njengabafokazi abangehloniphi uNkulunkulu nezoni ezimbi. Kodwa-ke, kungashiwo into efanayo kwabaningi baseYurophu ababehlala eKapa ezinsukwini zakuqala zekoloni.
U-Van Riebeeck ngokwakhe waxwayisa ozakwabo ukuthi labo "abangabikho emthandazweni wansuku zonke. .. abahambela kakhulu enkolweni yabo. .. baxwayiswa kusukela manje ukuya endaweni eqokiwe ngenhloso,. .. labo abasele bangase balahlekelwe izinsuku eziyisithupha zowayini . .. ".
Ngalezo zinsuku, iNkampani yalandela iSonto LamaProtestant Dutch Reformed of Holland, kanti uNgqongqoshe wokuqala, uJohan van Arkel, wafika eKapa ngo-1665, eminyakeni engaphezu kweshumi emva kokuqalwa kwendawo.
AmaRoma Katolika namaLuthela aseJalimane ayengavumelekile endaweni, ​​futhi ngisho nama Fuguenots aseFrance ayenqatshelwa ekuqaleni ekukhulekeleni kwawo.
Emashuminyakeni ambalwa alandelayo, ambalwa kakhulu amaKhoikhoi noma iziChwe aphendulelwa aba amaKristu. Kodwa lokhu akusho ukuthi izakhamuzi zazingena inkolo.
Babengenandaba ikakhulu kulokho okwenzeka emiphefumulweni yabo lapha-ngemuva. Esikhundleni salokho, izinkolelo ezingokomoya zazihlelwe ngezindaba ezisebenzayo, ezifana nesidingo semvula, ukululamiswa kokugula, ukuzala kwezitshalo, ubukhulu bezilwane nezinto ezijwayelekile zokuphila nsuku zonke.
Ngokwesibonelo, iziChwe zakholelwa kokuningana okuhlanganisa umdali/uKaggen engunkulunkulu ophakeme. AmaKhoikhoi, akhulekele uTsui//Goab, uNkulunkulu oPhezukonke, owaqathaniswa uGuanab, unkulunkulu wobubi.
Kuwo maqembu ombili, okhokho (imimoya yezihlobo ezifile) banikeza ukuxhumana phakathi kwabaphilayo nabonkulunkulu (ababevame ukuboniswa njengomuntu-silwane). Inkambiso, imidanso yezingoma kanye nezidakamizwa kwakuyisici esiqhubekayo semikhuba yabo yenkolo.
Ngakho-ke uhambo lokuqala lwezithunywa zevangeli olwadlula e-Namaqualand lwalwenziwa ngu-Christian Albrecht ngo-1805. Kamuva ngalolo nyaka, yena nomfowabo u-Abraham bamisa umsebenzi phakathi kweNamaqua Enkulu eWarmbad (eNamibia yanamuhla), basizwa uJe Seidenfaden.
Kodwa ngo-1811, u-Abraham wabulawa yisifo sofuba, futhi lo mkhankaso wamiswa yinhloko enkulukazi uJager Afrikaner. Abathembekile base bebalekela eningizimu baya empumalanga yeNamaqualand, emngceleni osentshonalanga walokho okubizwa ngokuthi iBushmanland. Lapha, ngokuzimisela bavula umkhankaso omusha ePella (eduze nomzana wanamuhla wasePofadder).
I-LMS kanye namanye 'amaLuthela' aqhubeka ngemizamo e-Namaqualand. Ngo-1813, uMfundisi John Campbell wabiza ePella, futhi isithunywa sevangeli saseJalimane, uChristopher Sass, savula imishini eSilwerfontein. Ngo-1815 uMfundisi J.H. U-Schmelen wamisa imishini yaseBethanien eNamibia. Ngo-1816, uRev. Barnabas Shaw wamenywa ukuba amise umsebenzi waseWesleyan eLeliefontein, epulazini eyayinikezwe abantu bomdabu uMbusi Ryk Tulbagh maphakathi nawo-1700.
Lokhu kwenzelwe uMqondisi weHaaimaap, okwakwaziwa ngokuthi nguJantje Wildschut (Johnny Wildshot). Ngo-1818, uMfundisi Schlemen waya eKookfontein (eyaziwa nangokuthi iKokfontein noma iBasondermied) wabeka imishini, wayiqamba ngokuthi i-Steinkopf ngokuhlonipha umqeqeshi wakhe nomfundisi eLondon. Wabuye wasungula imishini eKommagas.
Ngokushesha, i-Rhenish Mission Society yangena esenzweni futhi ngo-1830, omunye wabahloli bayo, uDkt. E. Richter, wavakashela kude kakhulu enyakatho-ntshonalanga yeNamaqualand ukuhlola lesi sifunda esikude. Isiteshi sezemishini saqalwa kamuva e-Kuboes maphakathi no-1800 njengesizinda esincane se-Steinkopf.
Abantu baseKuboes babeyingxube ye-Nama namaBastaard, futhi sonke isifunda saziwa ngokuthi i-Richtersveld ngokuhlonipha ukuvakasha kukadokotela omuhle. Ngo-1852, iSonto LaseRhenish (elisho okuvela eMfuleni i-Rhine) laphinde lasungula umsebenzi weComordia, eduze kwaseSpubbok.